Maxaa kaaga baxay sheekadan kooban? | Hadalsame Media
Guddiga Doorashooyinka Somaliland oo la siiyey ballanqaad ay uga duwanaan doonaan…
Home Madadaalada Maxaa kaaga baxay sheekadan kooban?
Maxaa kaaga baxay sheekadan kooban?
(Hadalsame) 24 Maajo 2018 – Wuxuu weerarayaa meel xarun u ah kooxo ku shaqaysta dembiyada abaabulan, kaddibna wuxuu ku xirayaa bambooyin marka uu badankooda laayo waxaana sidaa ku dhimanaya gabdho yar yar oo tuugada u afduubnaa oo uusan isagu ogayn ama arag.
Kaddib waa loo yeerayaa askarigii howlgalkaa fuliyay waxaana la tusayaa maydkii gabdhaha yar yar oo badankoodu u dhintay neef qabatoon ka dhashay qaac qolalkoodii ugu yimid, waloow uu isagu soo badbaadiyay wiil yar oo uu arkay.
Waxaa lagu leeyahay: ”Waan fahmi karnaa inuu ujeedkaagu fiicnaa, lkn waxaad tahay millateri oo booliis ma ihid, tan kale halkani ma aha Afrika ama Afghanstan oo aad la qabsatay in rayidka la iska dilo, lkn kaa yeeli maayo.”
Waa senaariyo ku jira film-ka Best Crime oo uu wado Jean-Clude Van Dame.
Previous articleFalsafadda fulayga & fashilka la socda
Next articleILA QOSOL: Qoys been lagu qabtay!
Guddiga Doorashooyinka Somaliland oo la siiyey ballanqaad ay uga duwanaan doonaan wixii ka dhacay Jubaland & KG Somalia + Sawirro
(Muqdisho) 03 Agoosto 2021 - Kulan dhex maray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo Guddiga doorashooyinka Xildhibaannada labada gole ee...